Soo Saaraha Ugu Wanaagsan GJCNC-BMA | Gaoji
1. Xajmiga Maxbarbar: 15 * 140 mm
2. Min Busbar Cabbirka: 3 * 30 * 110 mm
3. Max Xuddunta: 62 Nm
4. Min dhexroor Ballscrew: ∅32 mm
5. Goobta kubbadaha: 10mm
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka 'CNC busbar' wuxuu inta badan ku shaqeeyaa qashin-xoqidda iyo buuxinta weyn ee busbar-ka. Waxay si otomaatig ah u soo saartaa nambarka barnaamijka waxayna u gudbineysaa nambarka qalabka ku saleysan shuruudaha ku saabsan qeexitaanka busbar iyo xogta la gelinayo shaashadda bandhigga. Way fududahay in la shaqeeyo oo mashiin ayaa mashiinka basbaaska wax ku oolka ah leh oo muuqaal fiican leh.
Mashiinkaan waxaa loo isticmaalaa in lagu fuliyo makiinada qaanso goobeedka ee loogu talagalay madaxa busbar-ka H with3-15mm, w≤140mm iyo L≥280mm.
Madaxa baarka ayaa loo qaabeyn doonaa qaabka qaabdhismeedka go'an.
Xirmooyinka waxay qabsadaan tiknoolajiyad otomaatig ah oo toos ah si ay si sax ah madaxa ugu cadaadiyaan si wanaagsan barta xoogga dhalista.
Kiciye ayaa loo isticmaalay madaxa cadaadinaya si loo sugo xasilloonida qalabka shaqada, taasoo ka dhigeysa saameyn dusha sare ee mashiinka.
Haysashada qalabka caadiga ah ee BT40 ee adduunka waxaa loo isticmaalaa beddelka daab fudud, qalafsanaan ganaax iyo saxnaan sare.
Mashiinkaani wuxuu korsadaa boolal kubadeed oo sax ah iyo hagayaal toosan. Xamuul culus oo xamuul ah oo baaxad weyn leh ayaa loo xushay inay soo bandhigaan adkeynta mashiinka oo dhan, hoos u dhiga gariirka iyo sawaxanka, hagaajinta tayada qalabka shaqada iyo hubinta saxsanaanta sare iyo waxtarka.
Iyadoo la adeegsanayo qaybo ka mid ah noocyada caanka ah ee gudaha iyo adduunka, makiinadani waa mid adeeg dheer leh oo dammaanad qaadi karta tayo sare.
Barnaamijka loo adeegsaday mashiinkan ayaa ah gundhig barnaamijyada softiweerka ah ee softiweerka ah ee ay soo saartay shirkadeena, iyadoo lagu ogaanayo otomaatigga barnaamijyada. Hawlwadeenku maahan inuu fahmo lambarro kala duwan, mana aha inuu isagu / iyadu ogaadaan sida loogu shaqeeyo xarunta makiinada dhaqameed. Hawl wadeenku waa inuu galiyaa dhowr xuddun isagoo tixraacaya sawirada, qalabkuna wuxuu si otomaatig ah u dhalin doonaa lambarrada mashiinka. Waxay qaadataa waqti ka gaaban kan barnaamijyada gacanta waxayna baabi'isaa suurtagalnimada qaladka koodhka ee ay sababaan barnaamijyada gacanta.
Busbar lagu farsameeyay mashiinkan ayaa ah muuqaal quruxsan, oo aan dhibic ka soo bixin, yareynta cabirka golaha wasiirada si loo badbaadiyo booska isla markaana si weyn hoos loogu dhigo isticmaalka naxaasta.
Hore: Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC GJCNC-BD
Aragti (mm) Miisaanka (kg) Miiska Shaqada (mm) Isha hawada (Mpa) Wadarta Awooda (kw)
Awood Moter (kw) 7.5 Xoog Servo (kw) 2 * 1.3 Max Torpue (Nm) 62
Model Holder Model BT40 Ballaca Qalabka (mm) 100 Xawaaraha Spindle (RPM) 1000
Baaxadda Qalabka (mm) 30 ~ 140 Min Dhererka Waxyaabaha (mm) 110 Dhumucdiisuna wax (mm) 3 ~ 15
X-dhidibka Stoke (mm) 250 Y-dhidibka Stoke (mm) 350 Xawaaraha Degdegga ah (mm / min) 1500
Xuddunta Ballscrew (mm) 10 Saxnaanta booska (mm) 0.03 Xawaaraha Quudinta (mm / min) 1200